Ngenxa yensizakalo entsha Iwebhu-Academy, kusukela namuhla kuqhubeke ochwepheshe bamakhompyutha di ITrovaweb bazibeka ekukhonzeni abasebenzisi kude. Ochwepheshe be Ukukhangisa kwewebhu futhi of Internet izonikeza online IT yokubonisana ukuvumela noma ngubani ukuphatha iwebhu kahle.
I-Web-Academy: amathuba angenamkhawulo weWebhu onawo ngokubonga kokukude
Il web uyisifuba somcebo wethuba izinkampani e ochwepheshe. Kungasiza ukwethula ibhizinisi lakho, ukuthola amakhulu othintana nabo, ukunwebe inethiwekhi yakho yolwazi, ukuheha nokugcina ubuqotho amakhasimende. ke web inganquma impumelelo yakho inkampani noma umsebenzi wakho wobuchwepheshe. Kepha kuphela kulabo abakwaziyo ukuyisebenzisa kahle. Kusukela namuhla nawe ungazuza kakhulu ezingenakubalwa ithuba le-inthanethi sibonga u ukude kokubonisana kwe-IT enikezwe ochwepheshe be I-TrovaWeb.
Ukubonisana kwe-IT okukude ukuze ukwazi kahle i-Web
Inkonzo ye Iwebhu-Academy wazalwa ngokunembile Internet indawo elula futhi ethelayo. Ngiyabonga bakithi ukubonisana online, ngeke kusaba yi-labyrinth eyinkimbinkimbi okulula ukuyithola. Eqinisweni, sethule le nsizakalo Iwebhu-Academy ukusiza nje bonke abantu abadinga ukusebenzisa ngokugcwele inetha. Ukusuka kokulula ukuthumela i-imeyili ukufakwa kwe cm, silapha onakho ngokusebenzisa webinar, umhlangano wevidiyo e ucingo.
Izingqungquthela zekhompyutha ezikuqondisa igxathu negxathu
Inkonzo yethu ye I-IT Ukubonisana ukude kuzokusiza ukuxazulula zonke izinkinga onazo nezwe web, ukucacisa konke ukungabaza kwakho ngamandla we internet, ukuchaza yonke imigomo ongayifinyelela nabaqambi izinsiza zewebhu yakhelwe izinkampani e ochwepheshe. Isinyathelo ngesinyathelo, sizosula konke ukungabaza kwakho futhi sikusize usebenzise konke okuyikho amathuluzi online kudingekile ukufeza izinhloso zakho.
Ochwepheshe beWebhu nabezokuThengisa endaweni eyodwa
Ochwepheshe Bokumaketha beWebhu nochwepheshe emkhakheni weinformatics, izokunikeza ngezeluleko ezisebenzayo zokusebenzisa kangcono ukwaziswa kwesimanje ukuze uzuze yonke imigomo yakho yebhizinisi. Uzoba nabantu abakhona abazokuchaza konke odinga ukukwazi ngesinyathelo ngesinyathelo Amawebhusayithi, Ukubonakala okuku-inthanethi, amapulatifomu we E-commerce, izizinda, Ukukhangisa kwewebhu, iseva, izinjini zokucinga nokuba khona kwe-inthanethi. Sizoba yi-Aranzulla yakho yesimo. Ngeso elibheke emhlabeni we Ukukhangisa kwewebhu kanye nonkulunkulu Izinsiza ze-Web, ngaso sonke isikhathi ekusebenzeni kwezinkampani nabasebenza ochwepheshe.
Tags: ukubonwa kwewebhu ukumaketha ibhizinisi Izindaba thola